ibsa-dhaaba ULFO/THBO -
Ajjeechaa fii Saamicha Seeraan alaa Lammiilee Keenya Biyya Sa’uudi Arabiya Jiraatan irratti Raawwatamaa Jiru ilaalchee.
Ibsa dhaaba ULFO irraa mootummaa Saudi arabiyaatiifii dameelee gola addunyaa hundaaf ergame
Mootummaann sa’uudii arabiyaa gaafa 14 -11 – 2013 irraa jalqabee lammiilee keenya irratti tarkaanfii seeraan alaa kan gara jabinaa fudhachaati jira. Lammiileen keenya biyya keenya keeysatti imaammata gabroomfataa wayyaaneetiin hacuucamanii fala akkuma biyyoota biraa biyya sa’uudii arabiyaa keeysa jiraachaa turan. Ummanni keenya miidhaa hamaa kanaaf kan saaxilaman kun kanneen seeraan ala gara biyya kanaa seenan qofa miti, kanneen seeraan biyya kanaan jiratan qabaatanii yeroo dheeraaf jiraataa turan dabalatee qabeenya saamamuufii lubbuun ajjeefamaa jiran .Roorrifamuun seeraan alaa kun lammiilee keenya irratti deddeebi’ee raawwatamaa kanture tahuus Kan ammaa kun diinummaa ija baase waan taheef dhaabbiileen kabajamuu mirga namoomaatiif dhaabbatan hundi mootummaa sa’uudi arabiyaa irratti dhiibbaa jabaa akka godhan hoogganni dhaaba ULFO hubachiisee jira. Akkuma lammiileen keenya biyya sa’uudi arabiyaa jiraatan bifa kamiiniis tahu lammiileen sa’uudi arabiyaa biyya keenya keeysa seenaa turan ammaas seenaa jiran.
Lammiilee keenyarratti miidhaan seeraan ala raawwatamaa jiru kun murtii kan hin arganne yoo tahe, lammiilee biyya sa’uudi arabiyaa KAN bifa kamiinuu biyya keenya seenan irratti tarkaanfiin halu bahaa kan kana caalu fudhatamuuf kan jiru tahuu ULFOn akeekkachiisa cimaa dabarsee jira. Akka ummanni keenya biyya keenyarraa godaanu kan godhan keessaa tokko hiyyummaa gabrummaarraa burqe tahuun beekkamaadha. Mootummaafii tujaarotni biyya arabaa sirna gabroomfataa wayyaaneetiin waliif galuun arabootni lafa keenya saammachaa jiran.Haala kanaafii kkf hunsaan hundaan araboonni diina keenyaaf firoomanii ummata keenya biyyarraa akka bahan godhaa turan. Kanneen biyyarraa bahaniis human isaanii gatii xiqqaatti gurguranii araboota tajaajilaa jiran. Horii xiqqaan isaan tajaajilaa yeroo dheeraaf kuufatan saamamanii harka duwwaa mana hidhaatti darbamaa , Kaaniis rasaasaan ajjeefamaan gaafa 4 – 11 – 2013 irraa jalqabee hangaa ammaattinamoonni hedduun nurraa ajjeesanii jiran. Kanneen bakka namni hin arginetti du’aniis danuudha.Hujii fookkataa seera kamiinuu dhoorkaa tahe dubartoota keenya gudeedaa jiraachuu isaanii ragaalee gara garaa irraa hubachuun sandahamee jira.
Kanaaf dhaabni ULFO biyya keeysaa fii alattiiis mirga ummata keenyaa kabachiisuuf kan qabsooynu waan taheef, roorroo lammiilee keenyarra gayu kamuu kan hin fudhanne tahuu Eenyufillee hubachiisuu barbaanna. Gabaabumatti mootummaan sa’uudi arabiyaa lammiilee isaa kan biyya keenya seenaniif kan yaada’u yoo tahe saaminsaa fii ajjeechaa lammiilee keenyarratti raawwachaa jiru ariitiin akka dhaabu ULFOn akeekkachiisa.
1. lammiileen keenya seeraaniis tahe seeraan ala seenan qabeenya dafka isaaniitiin hojjatanii argatan irratti mirgi abummaa qabeenya akka kabajamuuf ULFOn mootummaa Saudi arabiyaa,Liigii arabaatiifii mootummoota idil addunyaatti hubachiisee jira..
2. kanneen heeraan jiraatan migi heeraan jiraachuu isaaiif akka kabajamuu fii kanneen seeraan ala jiraniis gidiraa takkaan maletti gara biyyaa akka galfaman dhaabni ULFO mootummaa sa’uudi arabiyaatiif ibsee jira..
3. lammiilee keenya kan hanga ammaatti rasaasaan ajjeefaman bifa seeraatiin ilaalamee murtiin barbaachisu mootummaa addunyaatiin sa’uudi arabiyaa irratti kan hin murtooyne yoo tahe turuus dafuus dhiigni lammiilee keenyaa lammiilee sa’uudi arabiyaatiif kan hin hafne tahuu hoogganni dhaaba ULFO murtii maayyii dabarsee jira. Biyyoonni lammiileen keenya keessatti baqatanii jiran hundi mirga lammiilee keenyaatiif kabajaa godhuun isaanii, lubbuu lammiilee isaanii biyya keenya seenaniif yaaduu akka tahe hubachiisuun hoogganni dhaaba ULFO dhaamsa isaa Xumuree jira.
Previous The people who lost their identity
Next Siyaasa jibbiinsaa fi karaa cabeen haa yaasuu irra, ilaa fi ilaameetu nubaasa.